DHAGEYSO Saraakiisha amaanka gobolka Hiiraan oo digniin u diray dadka isbaarooyinka dhigta. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Saraakiisha amaanka gobolka Hiiraan oo digniin u diray dadka isbaarooyinka dhigta.
Ayadoo todobaadyadii ina dhaafay ay cabasho ballaaran ka soo yeereysay dadka Shacabka ah ku nool deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan,kadib isbaarooyin la soo dhigay deegaano ka tirsan gobolkaas ayaa waxaa hada arintaasi ka hadlay Ciidamada amaanka ee gobolka hiiraan ku sugan.
Taliska Ciidanka xaslinta Gobolka Hiiraan ayaa soo saarey digniin ku socota Kooxaha iyo qaar ka mid ah Ciidamada oo la sheegay inay Gaadiidka ay Shacabku la socdaan isbaarooyinka u dhigta,isla markaana lacago baad ah kaga qaadeen deegano kale duwan.
Taliyaha Ciidanka xasilinta Gobolka Hiiraan Carab Yuusuf Nuur wuxuu sheegay inay sameeyeen howlgalo ay kula dagaalamayeen kooxaha isbaarooyinka u dhigta Gaadiidka Shacabka,sidoo kalena intii ay howlgalkaas ku guda jireen uu dagaal dhex amray.
Taliyaha ayaa sheegay inaan marnaba la aqbaleyn shaqsiyaadka safarleyda dhibaateynaya,qofkasta oo lagu qabtaa isagoo falkaas ku howlana tallaabo sharciga waafaqsan lagaq aadi doono.
Wadooyinka xiriiriya deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa marar badan laga soo sheegaa dhibaatooyin ay shacabku kala kulmaan kadib kooxo isbaarooyin dhigta wadooyinka ay dadku ku safraan.
← DHAGEYSO Barnaamijka Madasha, Abaalmarinta 26-08-2018
Wasiirka qorshaynta Soomaaliya oo magacaabay xoghayaha joogtada ee wasaaradiis. →